Irraan Oo Dayax Gacmeed U Diraysa Hawada sarre Iyo Reer Galbeedka Oo Ka Qayliyey |
Madaxa Wakaaladda Hawada ee Iiraan Murtada Beraari ayaa warbaahinta u sheegay in dalkiisu uu isu diyaarinayo in uu dhowr maalmood gudahood ku soo bandhigo dayax-gacmeed cusub oo loogu magac daray “Dafar”, kaasoo ay hawada u diri doonaan maalmaha soo socda.
Beeraari wuxuu si kooban u sharraxay dayax gacmeedkan iyo ujeedka ay ka leedahay Dawladdiisu, isagoo tilmaamay in hirgelinta qamar sanaacigan la bilaabay saddex sano kahor, iyadoo ay ka qayb qaateen 80 aqoonyahanno iiraaniyiin ah oo ku takhasusay cilmiga dayax gacmeedyada.
Wuxuu intaa ku daray in dayax gacmeedkan culayskiisu yahay 113 KG isla markaana uu adduunka oo dhan kusoo wareegi karo 15 jeer maalin kasta, sidoo kalena uu awood u leeyahay inuu 530 FEET oo hawada ah tagi karo.
“Ujeeddada ugu weyn ee Dawladda iiraan ka leedahay una samaysatay dayax gacmeedkan waxay noqon doontaa uruurinta muuqaallo, ka hortagga masiibooyinka dabiiciga ah, iyo horumarinta beeraha “ ayuu yiri Beraari.
Arrintan ayaa walaac xoog leh ku abuuraysa wadamada reer galbeedka oo maraykanku ugu horreeyo, iyagoo u arka in iiraan ay qaadayso tallaabooyin ka dhan ah shuruucda caalamiga ah ayna dhibaato ku tahay nabadgelyada caalamka.
Mudane Beeraari wuxuu kaloo caddeeyey in hay’addiisu ay ku talajirto inay sidoo kale soo gabagabeeyo soo saarida shan dayax gacmeed oo dheeraad ah bisha Maarso ee sanadka soo socda 2021.